Fitadiavam-bahaolana : miantso fahatsapan-tena sy andraikitra ny FFKM | NewsMada
Fitadiavam-bahaolana : miantso fahatsapan-tena sy andraikitra ny FFKM
Mby aiza ny fitadiavam-bahaolana amin’izao toe-draharaham-pirenena izao? Miantso fahatsapan-tena, fandraisana andraikitra, finiavana… avy amin ’ny mpisehatra politika ny FFKM.
“Hamafisiko ny antso avo ho an’ny zanak’ity firenena ity, indrindra ireo mpiantsehatra samihafa: eo amin’ny sehatra politika, na ny sehatra samihafa. Atao izao antso izao, iandrasana indrindra koa ny fandraisana andraikitra, ny fahatsapan-tena ary ny finiavana eo amin’ny tsirairay.”
Izay ny nambaran’ny filohan’ny Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto Madagasikara (FFKM), ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona, teny Tsimbazaza, omaly, taorian’ny fihaonany tamin’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max. Nifampidinihana tamin’izany ny fikaroham-bahaolana amin’ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao.
“Tsy misy hahita tombontsoa amin’ny fikorontanana eto amin’ity tanindrazantsika ity”, hoy izy. Izay no anaovan’ny fiangonana fanoloran-tena sy fandraisana andraikitra amin’ny fihaonana sy fampihaonana toy izao. Anisan’ny sehatra ngezabe ny andrimpanjakana toy ny Antenimierampirenena.
Manana ny tondrozotrany ny FFKM
Ao anatin’ny ezaka sy dingana ho amin’ny fampihavanana ny fitadiavana vahaolana ho an’ny firenena ankehitriny, araka ny fanazavany. Mihevitra ny FFKM fa hanao izao dingana izao: fihaonana amin’ireo tomponandraikitra samihafa eto amin’ny tany sy ny fanjakana, ao anatin’izao savorovoro samihafa izao. Izay no antony lehibe amin’ny fihaonana.
Efa manana ny tondrozotrany amin’ny fampihavanam-pirenena ny FFKM tao anatin’ny fihaonana farany tamin’ny fivorian’ny komity foibe, tany Antsirabe: hampihaona ny zanany eto amin’ny firenena sy ireo tomponandraikitra samihafa isan-tsokajiny. Heveriny fa mifanojo amin’izany ihany izao dingana fihaonana sy fampihaonana izao.
“Ny zava-misy no miova, fa mitohy hatrany ny tarigetran’ny FFKM: fikatsahana fihavanana sy filaminana eto amin’ny firenena”, hoy ihany izy.
Nisy koa ny fihaonan’ny filohan’ny FFKM tamin’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo.